Wararkii u dambeeyay weerarkii ka dhacay Masjidka Al Nuur (Sawirro) – Xeernews24
Wararkii u dambeeyay weerarkii ka dhacay Masjidka Al Nuur (Sawirro)
15. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar ruux hubeysan uu ka geystay Masjid ku yaala Xaafadda Christchurch ee dalka New Zealand kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya ayaa sheegaya in tirada dhimashaa weerarka ay gaadhay ku dhawaad 40 ruux oo ku sugnaa gudaha Masjidka weerarka uu ka dhacay, waxaana sidoo kale soo baxaya in masaajid kale uu weerar ka dhacay.
Qaar kamid ah dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan dad Soomaaliyeed oo ku dukanayay Masaajidka, waxaana la aqoonsaday ilaa iyo hadda Afar ruux oo Soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda.
Ciidamada amaanka ayaa bandow kusoo rogay xaafada weerarka uu ka dhacay, waxaana socda baxnaaninta dadka dhaawacyada ay gaadheen, kuwaasi oo la dhigay xarumo caafimaad oo magaalada ku yaala.
Ciidamada amaanka ayaa durba shaaciyay in ku dhawaad afar ruux oo mid ay haweeney tahay loo qabtay weerarka ka dhacay Masaajidka Al Nuur, waxaana mid kamid ah la xaqiijiyay inuu u dhashay dalka Australia.
Wali faahfaahin dhab ah lagama bixin guud ahaan khasaaraha weerarka ka dhashay, waxaana socdo baaritaan laamaha amaanka ay sameynayaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/Gacan-ku-dhiigleh.jpg 546 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-15 09:45:542019-03-15 09:45:54Wararkii u dambeeyay weerarkii ka dhacay Masjidka Al Nuur (Sawirro)
Recep Tayyip Erdogan ayaa xadhigga ka jaray isbitaalka ugu weyn qaarada Yurub... Barakacayaasha Danlahelay ee degmada Afdam yaa umiciina?